ပီတာဇော်မြင့် | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ပီတာဇော်မြင့်
စတားဝါး ပီတာဇော်မြင့် (ဇော်ဇော်အောင်)
Categories: Short Stories | Tags: ပီတာဇော်မြင့်, ဇော်ဇော်အောင်, ၀တ္ထုတို, lanolay, Short Stories, zaw zaw aung | Permalink.
မေခလာနှင့် ပီတာဇော်မြင့် (ဇော်ဇော်အောင်)
အပြောအဟောကောင်း၍ ပီတာဇော်မြင့် သွားကျိုးခြင်း (ဇော်ဇော်အောင်)
သိပ်မကြာသေး၊ ဟိုတလောလေးကပင် စာရေးဆရာတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေကဖြင့် အဟောအပြောကောင်းသည်၊ ဘယ်သူတွေကတော့ ဘာတွေပြောမှန်းမသိ၊ အဟောအပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ တစ်စုံတစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်က ဆောင်းပါးရေး ဝေဖန်လိုက်၍ အတော်ပူညံပူညံဖြစ်သွားကြောင်း သတိပြုမိလိုက်၏။ အမှန်စင်စစ်တော့ ဤမြေကမ္ဘာသည် အလွန်ပူညံပူညံဖြစ်နေသောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုကိစ္စအဖြစ်အပျက်သည် အဆန်းတကျယ်မဟုတ်လှ။ သို့သော် ပီတာဇော်မြင့်ကတော့ ပြုံးမိသည်။ ဘယ်သူတွေ အဟောအပြော ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သူများတွေ အဟောအပြော ကောင်းတယ်ဆိုသည်မှာ အလကား၊ ပီတာဇော်မြင့်သည် အဟောအပြော ရှာမှရှား။ သူ့ကို အဟောအပြောကောင်းသလား မမေးနှင့်၊ ပီတာဇော်မြင့် သံလျင်သင်္ဘောပေါ်မှာ ဆေးရောင်းသည်။
” သီတာသင်္ဘောကြီးစီးပြီး ခရီးသွားကြတဲ့ ခရီးသွား လုပ်သားပြည်သူ အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ… ကျွန်တော့်ကို စကားအနည်းငယ် ပြောခွင့်ပြုပါ။”
တိုက်ပုံအင်္ကျီပန်းရောင်၊ အတွင်းက ရှပ်အင်္ကျီက စတစ်ကော်လာခေါ် လည်ကတုံး အနက်ရောင်၊ လုံချည်က တစ်ပေပတ်လည်ရှိသော စတုရန်းအကွက် အစင်းအစင်းများပါသည့် မဲနယ်ရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် အိန္ဒိယပလေကပ်အတု။ ဘယ်လိုမှ အချိုးမပြေသော အရောင်အသွေးတို့က စုံလင်ဆန်းကြယ်စွာ။ လူကလည်း အရပ်ပုပု၊ ၀၀၊ အသားမည်းမည်း၊ ဆံပင်ရှည်ရှည် လည်ကုတ်ထောက်၊ ငွေကိုင်းနှင့် မှန်အကြည် ပါဝါမပါသော မျက်မှန်က တတ်လိုက်သေးသည်။ သို့သော် ပီတာဇော်မြင့် အပြောကောင်း၏။ ဆေးရောင်းလာတာကြာပြီ။
Categories: Short Stories | Tags: ပီတာဇော်မြင့်, ဇော်ဇော်အောင်, ၀တ္ထုတို, Short Stories, zaw zaw aung | Permalink.
ပီတာဇော်မြင့်ထံမှာ လာယူပါ (ဇော်ဇော်အောင်)
ပီတာဇော်မြင့်သည် တောင်ပိန္နဲပင်ကြီး အောက်ခြေတစ်နေရာတွင် ရပ်လိုက်၏။ သူ့လွယ်အိတ်ထဲမှ ပလတ်စတစ်အခင်းကို ထုတ်သည်။ ခေါက်ထားသည်ကို ဖြန့်၏။ ထို့နောက် ပင်ခြေရင်းတွင် ချခင်းသည်။ နောက်ထပ် ပလတ်စတစ်စတစ်စကို ထုတ်ပြန်၏။ အသေအချာဖြန့်သည်။
သူ့ဂျင်းဂျာကင် အိတ်ထောင်ထဲက နှိပ်သံမှိုကလေးတွေ ထုတ်၏။ နောက်က တောင်ပိန္နဲပင်ကြီး၏ ပင်စည်တွင် ဒုတိယပလတ်စတစ်စကို ဖြန့်၍ သံမှိုများနဲ့ နှိပ်တွယ်ကပ်လိုက်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု … ။
စာပေအနုပညာနယ်မှာ အတော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း …
ထောက်ခံချက်များ ပေးနေသည်။ အမြန်လာယူပါ။
ဟူသော စာတန်းကို ပလတ်စတစ်အဖြူပေါ်မှာ အနီရောင်စာလုံးများနှင့် ရေးထား၏။
ထို့နောက် ပီတာဇော်မြင့်သည် လွယ်အိတ်ထဲက စာရွက်တစ်ရွက်ကို ထုတ်ယူ၏။ ဘောပင်ကို ထုတ်ယူ၏။ ပလတ်စတစ်အခင်းပေါ်မှာ အသေအချာ ချထား၏။
ထို့နောက် လွယ်အိတ်ထဲက ဂျိုးသိန်းဆေးပေါ့လိပ်နှင့် မီးခြစ်ကိုထုတ်၍ အသေအချာ တင်ပျဉ်ချိတ် ထိုင်လိုက်သည် မီးညှိဖွာလိုက်၏။ အရသာခံ၍မှိန်းလိုက်၏။ အား … ရသပါပဲ။
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ပီတာဇော်မြင့်, ဇော်ဇော်အောင်, ၀တ္ထုတို, Short Stories, zaw zaw aung | Permalink.
ပီတာဇော်မြင့်၏ ပြုပြင်၍မရသော အမှားများ (ဇော်ဇော်အောင်)
ဥံဖွ ပီတာဇော်မြင့် (ဇော်ဇော်အောင်)
ကဗျာထဲမှာ နေရာလွတ်တွေရှိသည် (ဇော်ဇော်အောင်)
ဘုံထွတ်နန်းတောင် နေသို့လော (ဇော်ဇော်အောင်)
Categories: Short Stories | Tags: ပီတာဇော်မြင့်, ဇော်ဇော်အောင်, Short Stories | Permalink.
ပီတာဇော်မြင့် ပြုပြင်၍မရသော အမှားများ (ဇော်ဇော်အောင်)
ဥုံဖွ ပီတာဇော်မြင့် (ဇော်ဇော်အောင်)
Categories: Short Stories | Tags: ပီတာဇော်မြင့်, ဇော်ဇော်အောင်, ၀တ္ထုတို, lanolay, Short Stories | Permalink.
ကြောင်တွေရဲ့ မြို့ (တေဇာ - လရောင်လမ်း)
An Untitled Life: A Potrait of Maverick Myanmar Artist Rahula (ရှင်ဒေဝီ)
ဂျွန်ကိသ်စ်၏ ဂရိပန်းအို့းသို့ (မိုးဝေး)